MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Saw Saw Shar mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
သင်နှင့်သင့်မိသားစုဝင်များလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်အတွက် သွားရောက်ခဲ့သည့် နေရာများအတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်သည့် အခုပဲ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် “စောစောရှာ” Application ကို Download ရယူပြီး 1GB Data Free ရယူလိုက်ပါ။
1GB data bonus ရယူနိုင်ရန်
၁။ MPT4U မှ“ Saw Saw Shar” application ကို download ဆွဲပါ။
၂။ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အချက်အလက်များ သည် မှန်ကန်စွာ ရှိရမည်။
(MPT အသုံးပြုသူများ၏ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ကို MPT4U (My profile) မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။)
COVID-19 ထပ်မံမပြန့်ပွားစေရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်နှင့် ယခုလို အရေးပေါ်အချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ MPT မှ ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမည့်MPT
သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် Covid-19 ဖြစ်ပေါ်နေသော နေရာကိုသွားရောက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကို အက်ပလီကေးရှင်း မှသိရှိနိင်သည်။
2.ဒီ APP ကိုသုံးလျှင် ဒေတာဖိုးကုန်ကျသလား?
3.Covid-19 App ကိုမည်သည့်နေရာမှာ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မလဲ?
MPT4U မှတဆင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
4.အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရန် ဒေတာဖိုးပေးဖို့လိုပါသလား?
MPT4U မှတဆင့် ဒေတာဖိုးအခမဲ့ဖြင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
5.ဘယ်လို အပိုဆုကို ရနိုင်မလဲ?
“Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်ပြီး ရက်၃၀ သက်တမ်းရှိ 1GB ဒေတာ အပိုဆုကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် (၁)ကြိမ်သာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်)
အောက်ပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက ဒေတာ အပိုဆုကို ရနိုင်ပါသည်။
(၂) ဒေတာချွေတာသည့်စနစ်နှင့် lite စနစ်ကိုပိတ်ထားပြီးနောက် MPT မိုဘိုင်းကွန်ရက် ကို သုံးပြီး “Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်း
(၁) Sim card များကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်း (မတ်လ (၇)ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။) မပြီးပါက App ဒေါင်းလုတ်ပြီး (၃)ရက်အတွင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
6.မည်သူက ဒီအပိုဆုကိုရပိုင်ခွင့်ရှိလဲ? ဘယ်အခြေအနေမှာ အပိုဆုကို ရနိုင်မလဲ?
အောက်ပါအချက်များမှလွဲ ပြီး မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအားလုံး ဒေတာအပိုဆုကိုရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
-iOS အသုံးမပြုသူများ- postpaid အသုံးပြုသူများ၊ Base tariff အသုံးပြုသူများ၊ CDMA မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူများ
(၁) ဒေတာချွေတာသည့်စနစ်နှင့် lite စနစ်ကိုပိတ်ထားပြီးနောက် MPT မိုဘိုင်းကွန်ရက် ကို သုံးပြီး “Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်း
(၂) Sim card များကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်း (မတ်လ (၇)ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။) မပြီးပါက App ဒေါင်းလုတ်ပြီး (၃)ရက်အတွင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
7.ဧပြီ (၂၁) မတိုင်ခင် “Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားလျှင် အပိုဆု ရနိုင်မလား?
(၂) MPT မိုဘိုင်းကွန်ရက် ကို သုံးပြီး “Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်း
8.Sim card များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ ဒေတာ အပိုဆုကို ရနိုင်မလား?
Sim card များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့ App ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး (၇၂) နာရီအတွင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
9.သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက မည့်သည့်အချိန်တွင်ဒေတာ အပိုဆုကို ရရှိနိုင်မှာလဲ။
App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး (၇) ရက်အတွင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
10.ဘယ်အချိန်ကာလအတွင်း လုပ်ရင် ဒီဒေတာ အပိုဆုကိုရရှိနိုင်မလဲ?
MPT network ဖြင့် “Saw Saw Shar” App ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူခြင်း၊ Sim card များကို အချက်အလက်မှန်ကန်စွာဖြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကို ဧပြီ (၂၁)ရက်မှ ဇူလိုင် (၃၁) နေ့အတွင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒေတာ အပိုဆုကိုရရှိနိုင်ပါတ+D10:G15ယ်။